Faransiiska oo gaaray finalka Koobka Aduunka - Worldnews.com
Faransiiska oo gaaray finalka Koobka Aduunka
Xulka kubadda cakta Faransiiska ayaa xalay gaaray ciyaarta kama danbeysta ah ee Koobka Aduunka kaddib markii 1-0 uga badiyeen jiilka dahabiga ee Belguim. ...
Faransiiska oo u gudbay wareega 16-ka Koobka Aduunka
Xulka kubadda cakta Faransiiska ayaa u gudbay wareega 16-ka ee Koobka Aduunka, kadib marki ay maanta 1-0 uga badiyeen kooxda qaranka ee Peru. ......
Xulka Faransiiska ayaa noqday horyaalka dunida ee kubadda cagta, ka dib markii uu ciyaar xiiso leh oo kama dambaystii tartanka Koobka Aduunka ah kaga guulaystay afar iyo...
Ingiriiska oo 28 kadib gaaray semi-finalka Koobka Aduunka
Xulka England ayaa marki ugu horreeysay tan iyo sannadki 1990-ki gaaray semi-finalka Koobka Aduunka kadib marki ay galabta 2-0 uga badiyeen Sweden. ......
Xulka Faransiiska oo markii labaad hantay Koobka Aduunka
RUSSIA - Xulka qaranka kubada cagta ee Faransiiska ayaa si rasmi ah ugu guuleystay Koobka Adduunka ee 2018 kadib markii kulankii kama dambeysta uu 4-2 ku khaarijiyay...
Gareowe Online 2018-07-15
Belgium-ka oo ku guuleystay kaalinta 3aad ee Koobka Aduunka 2018
MOSCOW - Xulka qaranka kubadda cagta ee Belgium ayaa guul 2-0 oo uu ka gaaray dhigiisa Ingiriiska waxay ka caawisay inay kusoo baxaan kaalinta saddexaad ee tartanka koobka aduunka 2018. Ciyaartoyda kala ah, Thomas Meunier oo bandhiga goolasha daah-furay daqiiqadii 4aad, iyo Eden Hazard oo soo xiray daqiiqadii 82 ayay uga mahad-naqayaan jamaahiirta Red Devils guushaan muhiimka...
Faransiiska oo usoo baxay Final-ka Koobka Aduunka 2018
RUSSIA - Xulka qaranka kubada cagta ee Faransiiska ayaa iska xaadiriyay Final-ka koobka aduunnka 2018, kadib markii uu dubtay wadanka Belgium-ka oo ay wada dheeleen kulan ka tirsanaa wareegga afar dhamaadka [Semifinal]. Ciyaarta dhex-martay labadaan dal ayaa waxay kusoo dhamaatay 1-0, oo uu ku badiyay Faransiiska, iyagoo goolka guusha uga mahad-celinaya daafaca Barcelona ee...
Tartankii Koobka Aduunka oo maanta la soo gabagabaynayo
Waxa maanta la soo gabogabaynayaa tartankii kubadda cagta Aduunka ee ka socday dalka Ruushka, waxaana ciyaarta final ka ah gorrodda isku dari doona xulka Croatia iyo ka Faransiiska. Ciyaaritii shalay dhacday ee loogu tartamayey kaalinta saddexaad ayaa waxay guushu laba gool iyo eber ku...
Finalka Tartanka BBA: Somalia v Tanzania
Xulka kubada cakta Soomaaliya ee ay da,diisu ka hooseyso 17-ka sano ayaa lagu wadaa in maalinta birrito ah ay ciyaarta kama danbeysta ah ee Koobka Bariga iyo Bartamaha Africa la ciyaaraan dhigooda Tanzania. ......
Joe Gomez: Kama qayb geli doono cayaarta horyaalka Yurub
Cayaaryahanka difaaca uga dheelo ee kooxda Liverpool Joe Gomez ayaana ka qayb geli doonin cayaarta dhex mari doonto kooxdiisa iyo Real madrid kaddib markii uu dhaawac soo gaaray. Cayaaryahankan 20 sano jir ah ayaa la daalaacayay dhaawac soo gaaray bishii Marso xilli ay socotay ciyaar saaxibtnimo ay lahaayeen xulalka kubadda cagta Ingiriiska iyo Netherlands. Joe Gomez ayaa sido...
Falanqayn ku saabsan cayaarta kama dambaysta ee Koobka Adduunka
Cayaaryahanka khadka dhexe uga dheela xulka Faransiiska Blaise Matuidi ayaa lagu wada inuu cayaaro galabta inkastoo dhawaan uu dhaawac uusoo gaaray kaddib markii ay isku dhaceen Eden Hazard xiliiggii ay la cayaareen xulka Belgium. Ivan Perisic oo cayaaro xulka Croatia ayaa lagu soo warramaya inuu dhaawac yahay xilli dhawaan uu kasoo qayb geli waayay tabbabar ay samaynaayeen...